Abahleli bokuhlela (* Abahleli be-Conf) | Kusuka kuLinux
Alf | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Aplicaciones
Selokhu yaphuma I-Gnome 3, Unity y Igobolondo le-Gnome, Ngiqale ukufuna enye indawo kwazise angikuthandanga lokho okuvelile, kepha lokho akungivimbi ukuthi ngiphenye.
Ezinguqulweni ezindala ze- Ubuntu con I-Gnome2 izilungiselelo zayo eziningi zingahlelwa ngazo Umhleli we-Gconf, ilusizo lapho ukusetshenziswa okulungile kokuhlelwa kwesoftware ethile kunganikezanga nganoma iyiphi indlela yokushintsha inketho; manje nge I-Gnome3, ezinokuhlangana okuhlukile (Mate, Cinnamon, Gnome-Shell, Ubunye) kusetshenziswa eziningana "Abahleli be-Conf" o "Abahleli bokuhlela".
Ngamunye walawa "Abahleli bokuhlela" Kumele zenziwe zisuselwa kusixhumi esibonakalayo ezenzelwe zona, uma sizisebenzisa kusuka kwesinye isixhumi ngeke sibone imiphumela yazo kuze kube siqala i-interface efanelekile "Abahleli bokuhlela" esikushintshile.
Umhleli we-GConf: Okwezindawo zokuhlangana I-Cinnamon y Igobolondo le-Gnome. Kufanele ufake iphakheji umhleli we-gconf, bese usebenzisa umyalo umhleli we-gconf . Kulokhu, noma ngabe kusetshenziswa uhlelo olufanayo lomhleli, okufakiwe okuhlukile kuzohlelwa ku- I-Cinnamon futhi Igobolondo le-Gnome.
Isibonelo, ukushintsha izinkinobho ewindini lohlelo Khulisa / Nciphisa / Vala, ihlelwe ku- Umhleli we-Gconfukungena: ideskithophu »gnome» igobolondo »amawindi: inkinobho_layout esibonakalayo Igobolondo le-Gnome umnyango: ideskithophu »isinamoni» amawindi: inkinobho_layout esibonakalayo I-Cinnamon
Ngokungafani nokwenzeka nge-gconf-editor in I-Gnome2 (ushintsho luqale ukusebenza ngokushesha) , manje kufanele siphume esimisweni bese siyifaka kabusha.
Okokuhlela Umhleli we-GConf singasebenzisa ithuluzi lokusesha (Hlela »Sesha) okusiza ukuthola inani noma igama lokhiye othize.
Mate-conf-umhleli: Njengoba igama layo liphakamisa ukuthi lisetshenziselwa ukumiswa kwe-MATE. Izinguquko esizenzayo zisebenza ngokushesha, uma sizenza kusuka kusixhumi esibonakalayo esifanele: MATE.
Isibonelo, kusixhumi esibonakalayo se-Mate ukushintsha izinkinobho kuwindi lohlelo Khulisa / Nciphisa / Vala,, ihlelwe ku- Mate-conf-umhleli umnyango: izinhlelo zokusebenza »uhlaka» okuvamile: inkinobho_layout
Okokuhlela Umhleli we-Mate-Conf singasebenzisa ithuluzi lokusesha (Hlela »Sesha) okusiza ukuthola inani noma igama lokhiye othize.
Umhleli weDConf: Kusetshenziswe nge-interface Unity. Kufanele ufake iphakheji amathuluzi we-dconf, bese usebenzisa umyalo umhleli we-dconf. Izinguquko esizenzayo zisebenza ngokushesha, uma sizenza kusuka kusixhumi esibonakalayo esifanele: Unity.
Isibonelo kusixhumi esibonakalayo Unity, ukushintsha izinkinobho ewindini lohlelo Khulisa / Nciphisa / Vala, ihlelwe ku- Umhleli we-Dconfukungena: org »gnome» Shell »ibhala ngaphezulu: inkinobho_layout
Kunoma iyiphi indlela ye- "Abahleli bokuhlela" ukuhlela kanjani inkinobho_yokudlala Kuyafana nokuthi kwenziwa kanjani ku- umhleli we-gconf en I-Gnome2.
Iyahlela Umhleli weDConf kunzima ukwedlula ezinye "Abahleli bokuhlela" njengoba ingenalo ithuluzi lokusesha ukusiza ukuthola igama elithile eliyinhloko noma inani. Noma kunjalo kufanele ukhumbule ukuthi usebenzisa lezi "Abahleli bokuhlela" Akuyona indlela enconyiwe yokuhlela okuncamelayo kwedeskithophu, kepha kungahle kube wusizo lapho ukusetshenziswa okulungile kokuhlelwa kwesoftware ethile kunganikeli indlela yokushintsha noma yiziphi izinketho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Abahleli bokuhlela (* Abahleli be-Conf)
Umhleli we-dconf futhi usebenzela iPantheon (okuyisisekelo)
I-Psst, kuhle kakhulu, kepha uphuthelwe yi-Xfconf kufana nokuthi usho i-Xfce Configuration Editor 😉
Yup, kuliqiniso 😀
I-DNF: Umphathi omusha wePhakheji we-Fedora 18
Faka futhi ulungiselele iPlank ku-Debian Testing + [Ideskithophu yami kuleli sonto]